minthantzaww: gsm ဖုန်း တွင် အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ရန် setting ထည့်ခြင်း
gsm ဖုန်းတွင်အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်...speed ကတော့ download ကို 1 second = 1 kb to4kb အထိပဲ ရပါတယ်..idm နဲ့ download လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့4kb to 15 kb ထိရပါတယ်...sony ericsson ဖုန်းနဲ့ ဆိုရင် ကွန်ပြူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်...
nokia နဲ့တော့ မစမ်းသက်ရသေးပါ...sony ericsson တွင် setting ထည့်နည်း ပြောပြချင်ပါတယ်...ပထမဆုံး internet setting တွင် accect point name ကို mpt ဟုထည့်ပါ...APN name ကို mptnet ဟုထည့်ပါ....username နေရာတွင် mpt ဟုထည့်ပါ...password မလိုပါ...proxy လည်းမလိုပါ...ထို့နောက် ဖုန်းကို ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်ပါ..connection bar/ဖုန်း နက်ဝေါ့ တိုင်ဘေးနားတွင် E ဟု ပေါ်လာပါက အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ...ထိ်ု့နောက် browser ထဲဝင်ပါ...setting တွင် access point နေရာတွင် mpt ကိုရွေးပါ..www.google.com ကို အရင်သွားပါ..အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ...website လိပ်စာကို တိုက်ရိုက်ထည့်သုံးပါက လိုင်းနှေးသောကြောင့် မတက်တာများပါတယ်..google သို့ အ၇င်ဝင်ပြီး search box တွင် သွားလိုသောလိပ်စာကို ထည့်ပြီး ရှာပြီးမှ ကျလာသော လိပ်စာကို ၀င်တာက ပိုမြန်ပါတယ်...gmail ကို သုံးလိုလျှင် google တွင် gmail ဟု ရိုက်ပြီး ရှာလိုက်ပါ...gmail လိပ်စာ ကျလာလျှင် ၀င်လိုက်ပါ...gtalk အသုံးပြုလိုလျှင် google တွင် ebuddy ဟုရိုက်ပြီး ရှာလိုက်ပါ..ebuddy website ၀င်ပြီး software ကို download လုပ်ပါ..မိမိ ဖုန်းအမျိုးအစားကိုရွေးပါ..software ကို ဖုန်းတွင် download လုပ်ပြီး အသုံးပြုပါ..
iPhone5နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းဓာတ်ပုံများထွက်ပေါ်လာ
Apple ၏ မျိုးဆက်သစ်စမတ်ဖုန်းဖြစ်သော iPhone5နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းများသည် တစ်စထက်တစ်စ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာလျက်ရှိပြီး ပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်က This is my next ၀က်ဘ်ဆိုက်မှ iPhone5၏ဓာတ်ပုံကိုဖော်ပြခဲ့ကာ အခြားဆိုက်အများစုကလည်း iPhone5မှာ iPhone4ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ထားကြောင်း သိရသည်။ This is my next ဆိုက်မှဖော်ပြခဲ့သည့် ဓာတ်ပုံအရ iPhone5တွင် home ခလုတ်အရွယ်အစားကိုကြီးထားပြီး ဖုန်းရဲ့အရှေ့ဘက်ကို screen အပြည့်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားကာ ၎င်းကို GSM နှင့် CDMA တို့ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်းသိရသည်။ အခြားသတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်သော Bloomberg မှလည်း Apple ၏မျိုးဆက်သစ် iPhone ကိုစက်တင်ဘာလတွင် ရောင်းချဖွယ်ရှိကြောင်းနှင့် ၎င်းတွင် လျင်မြန်သောချစ်ပ်ဖြစ်သည့် A5 ပရိုဆက်ဆာနှင့် အဆင့်မြှင့်ထားသည့် 8 megapixel ကင်မရာတို့ ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် operating system အနေဖြင့် ပြီးခဲ့သည့်လက Worldwide Developers Conference တွင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည့် iOS5ကို အသုံးပြုဖွယ်ရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
ရေးသားသူ - နောင်နောင်
Apple iOS တွင် လုံခြုံရေးအားနည်းချက်ရှိနေဟုဆို
iOSတွင် အားနည်းချက်များ ရှိနေပြီး ထိုယိုပေါက်သည် အဖျက် Program တစ်ခုဖြင့် iOSအသုံးပြုသူများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်အောင် ထိုးဖောက်လာနိုင်
Appleကုမ္ပဏီထုတ် iOSတွင် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ယိုပေါက်ကြီးတစ်ခု ရှိနေကြောင်း ဂျာမန် နည်းပညာ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုက ထုတ်ဖော် ပြောကြားလိုက်သည်။ iOSတွင် အားနည်းချက်များ ရှိနေခြင်းကို မိမိတို့ ခြေရာခံနိုင်ခဲ့ပြီး ထိုယိုပေါက်သည် အဖျက် Program တစ်ခုဖြင့် iOSအသုံးပြုသူများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်အောင် ထိုးဖောက်လာနိုင်ကြောင်း ဂျာမန် အမျိုးသား IT နည်းပညာ အေဂျင်စီက ပြောကြားခဲ့သည်။ အေဂျင်စီက iOSသုံး ကိရိယာများသို့ အဖျက်Programတစ်ခုကို PDFဖိုင် အနေနှင့် အသုံးချပြီး emailမှတဆင့် ပေးပို့ကာ ဆိုင်ဘာ ရာဇ၀တ်မှုများ ပြုလုပ်လာနိုင်ကြောင်း ထောက်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါ ပြဿနာကို iPad, iPad 2နှင့် iPhoneများတွင် အသုံးပြုထားသည့် iOS 4.3.3ထိ Versionတွင် တွေ့ရကြောင်း အေဂျင်စီကဆိုသည်။ သို့သော် ယခင် Versionများတွင် အဆိုပါ ပြဿနာမျိုး ရှိနေမည်ဟု မိမိတို့ အတည်မပြုနိုင်ကြောင်း ယင်းအေဂျင်စီက ကြေညာထားသည်။ Apple၏ ဂျာမနီ ဌာနခွဲက ယခုသတိပေးချက်ကို အလေးထား လေ့လာမည်ဟု ကတိပြုထားသော်လည်း ယင်းတို့၏ iOSတွင် အားနည်းချက် ရှိနေသည်ဆိုခြင်းကို အတည်ပြု မှတ်ချက်ပေးခြင်း မရှိပေ။ အေဂျင်စီက လက်တလော အခြေအနေတွင် iOSကိရိယာများ အသုံးပြုသူများ အနေနှင့် မသင်္ကာဖွယ် PDFဖိုင်များကို ဖွင့်မကြည့်ရန် နှိုးဆော်ထားသည်။
သရီးဂျီ အင်တာနက်စနစ်အတွက် အင်တာနက် ဂိတ်ဝေးတစ်ခု ထပ်မံ တည်ဆောက်မည်
အစိုးရက ထပ်မံချထားပေမည့် ဂျီအက်စ်အမ်မိုဘိုင်းဖုန်းလေးသန်းတွင် ပါဝင်လာမည့် သရီးဂျီအင်တာနက်စနစ်ကို အထောက်အပံ့ကောင်းစွာပေးနိုင်ရန်အတွက် နောက်ထပ်အင်တာနက်ဂိတ်ဝေး (Internet Gateway) တစ်ခုကို စတင်တည်ဆောက်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ သတင်းရရှိသည်။ ယခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ချထားပေမည့် ဂျီအက်စ်အမ်မိုဘိုင်းဖုန်းအရေအတွက်သည် များပြားလွန်းလှသည့်အတွက် ယခုလက်ရှိတည်ဆောက်ပြီးစီးပြီး အသုံးပြုနေသော အင်တာနက်ဂိတ်ဝေးများမှာ ယင်းပမာဏကို လုံလောက်စွာပေးနိုင်မည့် Data Speed များမရှိနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
"နောက်ထပ်လာတော့မယ့် ဂျီအက်စ်အမ်ပမာဏက အရမ်းများတယ်။ အဲဒီ့ပမာဏလောက်ကို ထောက်ပံ့ပေးမယ့် အချက်အလက်အမြန်နှုန်းတွေက လက်ရရှိရှိနေတာနဲ့ မရတော့တဲ့အတွက် နောက်ထပ်တစ်ခုကို အမြန်တည်ဆောက်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်" ဟု အထက်ပါလုပ်ငန်း၏ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။ အသစ်တည်ဆောက်မည့် အဆိုပါအင်တာနက်ဂိတ်ဝေးအား ထပ်မံချထားပေးမည့် ဂျီအက်စ်အမ်သုံးသန်းနှင့်အတူ တစ်ပြိုင်တည်းတည်ဆောက်ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု သိရသည်
ထိုကဲ့သို့ တည်ဆောက်ရာတွင် Internet Backbone များကို ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ တောင်ကြီး အစရှိသည့် မြို့များအပါအ၀င် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ နေရာအနှံ့အပြား၌ တပ်ဆင်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု အထက်ပါတာဝန်ရှိသူကဆိုသည်။ ထို့အပြင် ထပ်မံပြီး အသစ်တည်ဆောက်မည်ဖြစ်သည့် အဆိုပါအင်တာနက်ဂိတ်ဝေးအား လက်ရှိအသုံးပြုနေသည့် ဂိတ်ဝေးများထက် Internet Data Speed ကို ပမာဏများစွာပေးနိုင်မည့် အနေအထားရရှိအောင် ပေးနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုလည်းဆိုသည်။ ယခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရတနာပုံတယ်လီပို့ အင်တာနက်ဂိတ်ဝေးနှင့် ဟံသာဝတီနေရှင်နယ်ဂိတ်ဝေး အစရှိသည့် အင်တာနက်အထောက်အပံ့ပေး ဆာဗာများရှိနေပြီး အသစ်တည်ဆောက်မည့်ဂိတ်ဝေး၏ အချက်အလက်သိုလှောင်နိုင်မှုပမာဏမှာ အထက်ပါနှစ်ခုထက် ပိုမိုများပြားမည်ဟုသိရသည်။
Credit: ယုဇနကိုကို (7Day News Journal)
"ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ဗီဒီယို ဂိမ်းတွေက ကလေးရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ထိခိုက်စေသလား…
ဒီတပတ်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံး တရားရုံကနေပြီးတော့ ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေ ငှားရမ်းခြင်းနဲ့ ရောင်းဝယ်ခြင်းကို တားမြစ်ထားတဲ့ ဥပဒေကို
ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီ ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေ ကစားခြင်းဟာ ကလေးငယ်တွေရဲ့ အပြုအမူကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်လွှမ်းမိုးနိုင်သလား။ ဒါကမေးခွန်းတစ်ခု ဖြစ်နေဆဲပါပဲ။ စိတ်ပညာရှင်တွေကတော့ ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ ယူဆနေပါတယ်။
အိုဟိုင်းအိုးပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှ ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ စိတ်ပညာပါမောက္ခ ဘရက်ဘွတ်ရှမန်းကတော့ ဒီဂိမ်းတွေနဲ့ ကလေးတွေရဲ့ ကြမ်းကြုတ်သောအပြုအမူတွေဟာ ဆက်စပ်မှုရှိတာ ထင်ရှားတယ်လို့ ပြောဆိုပါတယ်။
ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံးက လူပေါင်း တစ်သိန်းသုံးသောင်းကျော်နဲ့ လေ့လာမှု တစ်ရာ့သုံးဆယ်ကျော်ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုအရ ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေဟာ ကလေးငယ်တို့ရဲ့ရန်လိုတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ၊ ဒေါသထွက်လွယ်တာတွေ၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်းနဲ့ ကြမ်းကြုတ်သောအပြုအမူတွေကို ပံပိုးပေးနိုင်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှိုးဆွမှုတွေကို တိုးပွားစေတယ်လို့ ဘွတ်ရှမန်းက ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကလေးငယ်တွေရဲ့ သူတပါးအပေါ် ကူညီတတ်တဲ့ အပြုအမူတွေနဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတတ်တဲ့ ခံစားမှုတွေကို လျော့နည်းစေတယ်လို့ ဒီလေ့လာမှုက သက်သေပြနေပါတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
သို့ပေမဲ့လည်း တက္ကဆက် တက္ကသိုလ်က စိတ်ပညာရှင် ခရစ္စတိုဖာ ဖာဂူဆင်ကတော့ သူ့အမြင်ကို ဒီလိုပြောပါတယ်။ “ဒီလို မီဒီယာတွေရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုနဲ့ ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအပေါ် သုတေသနပြုမှုတွေဟာ အခြေအနေကိုမူတည်ပြီး ပြောင်းလဲမှု ရှိနိုင်ပါတယ်”။
ဖာဂူဆင်က ဒီလိုဗီဒီယိုဂိမ်းတွေ ကစားတဲ့အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့နည်းစေနိုင်ခြင်း စတဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အကျိုးရလာဒ်တွေလည်း ရှိကြောင်းနဲ့ ဒါကိုလည်း သုတေသနပြုဖို့လိုအပ်ကြောင်း ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
“ဒီလေ့လာမှုနယ်ပယ်ဟာ ပါရာဒိုင်းပြောင်းလဲမှု (စံပြောင်းလဲမှု) ရဲ့ အလယ်တည့်တည့်ကို ရောက်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီကြမ်းကြုတ်တဲ့ ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေနဲ့ ကြမ်းကြုတ်မှုတွေ အကြောင်းကို နားလည်ဖို့ အသစ်တဖန် ကြိုးစားရင်းနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလေ့လာမှုကို ဘက်စုံထောင့်စုံကနေ တတ်နိုင်သလောက် ကျွန်တော်တို့ လေ့လာစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါသေးတယ်လို့” သူက ဆိုပါတယ်။
အိုင်အိုဝါးပြည်နယ် တက္ကသိုလ်က ဖွံဖြိုးရေးစိတ်ပညာရှင် ဒေါက်ဂလပ်ဂျင်တိုင်းကတော့ ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေနဲ့ ကလေးတွေရဲ့ အပြုအမူတွေအကြား ဆက်စပ်မှုကို လေ့လာတဲ့ စိတ်ပညာသိပ္ပံဟာ နှောင့်နှေးကြန်ကြာနေဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ သူက ယုံကြည်ပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ စိုးရိမ်တာက ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေနဲ့ ကလေးတွေရဲ့ အပြုအမူဟာ ဆက်စပ်မှုရှိတယ်လို့ ခိုင်ခိုင်မာမာ သက်သေမပြနိုင်လို့ မိဘတွေက ငါတို့စိတ်ပူဖို့ မလိုတော့ဘူးလို့ ပြောပြီး ကလေးတွေကို လျစ်လျူရှုထားမှာကိုပါပဲ။ ဒီအချက်ဟာ သိပ္ပံပညာရပ်ကို ငြင်းဆန်တာမဟုတ်သလို မိဘတွေရဲ့ပါဝင်မှု အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း ကန့်သတ်ဖို့လိုတယ်လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သုတေသန ပြုမှုတွေအရ မိဘတွေဟာ ကလေးတွေရဲ့ မီဒီယာအပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားမှု၊ အသုံးပြုမှုကို စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီလို စောင့်ကြည့်တာဟာ ကလေးတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို ကန့်သတ်တာမဟုတ်ဘဲ၊ ကလေးတွေရဲ့ အပြုအမူအနေအထိုင်တွေ အပြုသဘောဆောင်လာအောင် မိဘတွေက ထိန်းသိမ်းပေးဖို့လိုတယ်လို့” ဒေါက်ဂလပ်ဂျင်တိုင်း က ပြောပါတယ်။
ကွန်ပျူတာထဲကို ဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုက်သွားတဲ့အခါ။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့် Memory Stick ကို အခြားစက်မှာ ထိုးမိပြီး မိမိစက်ကိုပြန်ထိုးလိုက်တဲ့အခါ လျှို့ဝှက် Script တစ်ခုက မိမိကွန်ပျူတာထဲကို လျှို့ဝှက်ဝင်ရောက်သွားပါတယ်။
အဲဒီ Script ကဗိုင်းရပ်စ်လဲမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။
သူက Autorun ကနေတစ်ဆင့် ၀င်ရောက်သွားတာပါ။ ဘာဘဲဖြစ်
ဖြစ် အခြားသောအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် USB Memory Stick ထဲကဖိုင်တွေကို ကော်ပီလုပ်မရ..ဖျက်မရ
တော့ဘဲ..Write Protect ဆိုတဲ့ Error ဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်း
မသိအောင် ဖြစ်ရတော့တာပါဘဲ။ အညာသားလေးကိုယ်တိုင်လဲ..ကြုံခဲ့ရဘူးပါတယ်။ဒါကြောင့် လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ဖြေရှင်းနည်းလေးကို ရေးပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
ပထမဆုံး..Start>Run(box) မှာ regedit လို့ရိုက်ထည့်ပါ။ Registry Editor ပေါ်လာပါမယ်။ အဲဒီထည်းမှာမှ.
HKEY_LOCAL_MACHINE>>System>>CurrentControlSet>>Control>>StorageDevicePolicies ထိရောက်အောင် အဆင့်ဆင့်သွားပါ။ ရောက်ရင် ညာဘက်အခြမ်းမှာ WriteProtect ဆိုတဲ့ အပြာရောင်ဖိုင်လေး
တစ်ဖိုင်ကို နှစ်ချက်ကလစ်ပြီးရင် Value Data ‘1’ ဆိုတာကို ‘0’ လို့ပြန်ပြောင်းပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Registry
Editor မှအပြီးထွက်ပြီး ကွန်ပျူတာကို Restart ချလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ပြန်စမ်းကြည့်ပါ။ Write Protect ဆိုတဲ့
Memory Stick ပျက်စီးနေပြီဆိုရင်တော့ အထက်ပါနည်းလဲ အသုံးမ၀င်တော့ပါ။
Window Password တွေကို ဘယ်လိုဖျက်မလဲ။ ဘယ်လိုပြင်ချင်သလဲ(Using USB Drive)
ပထမဆုံး Offline NT Password & Registry Editor ကို http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/usb110511.zip ကနေ Download ဆွဲပါ။ ရလာမှာက Zip ဖိုင်ပါ။ အဲဒါကို Extract လုပ်ပါ။ ISO ဖိုင်တစ်ဖိုင် ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ ISO ဖိုင်ကို Extract လုပ်ပါ။ Memory Stick ကို Format ချပါ။ ပြီးရင် Command Prompt ကိုဖွင့်ပါ။ အောက်ပါ Command တွေ ပေးပါ။ ဒီ Command တွေဟာ Memory Stick ထဲကို Bootloader ထည့်သွင်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှ Stick ကနေ Boot လုပ်လို့ ရမှာပါ။
ISOLINUX 3.51 2007-06-10 Copyright (C) 1994-2008 H. Peter Anvin
* Email : pnh@pogostick.net *
* CD build date: Sun Sep 23 14:15:35 CEST 2008 *
Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 2003 တို့ရဲ့ Windows Passwords & Administrator Passwords တွေကို ဖျက်ပေးမယ့် Software
ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူအများအနေဖြင့် မိမိကွန်ပျူတာရှိ Data များလုံခြုံရေးအတွက် ကွန်ပျူတာကို Passwords
ခံပြီး ကာကွယ်ထားတတ်ကြပါတယ်။တစ်ခါတစ်လေမှာ Passwords ကိုမေ့သွားလို့ဖြစ်စေ၊ အခြားသူတစ်
ယောက်က ၀င်ပြီးချိန်းသွားလို့ဖြစ်စေ ဖွင့်မရတော့ဘဲ ဒုက္ခရောက်ရပါတယ်။အဲဒီလို ကြုံနေရပြီဆိုရင် ဖြေရှင်းဖို့
အတွက် Trinity Rescue Kit ဆိုတဲ့ Software လေးက ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
ပထမဆုံး ကျွန်တော် Software ကိုအရင်ဒေါင်းလွတ်ချပါ။
ဒေါင်းလွတ်ချပြီးရလာသော ဖိုင်သည် .iso အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိစက်ထဲမှာ Nero Star Smart ဆိုတဲ့ အခွေကူးပေးသော Software ရှိတယ်ဆိုရင် ဒေါင်းလွတ်ချပြီးရလာသော ဖိုင်ကို ကလစ်ပြီး ဖိုင်ထဲမှာပါတဲ့ Data
တွေကို အခွေလွတ်ထဲသို့ကူးထည့်ပေးလိုက်ပါ။Boot CD တစ်ချပ်ဖန်တီးလို့ပြီးသွားပါပြီ။ဒါမှမဟုတ်…
မိမိဒေါင်းလွတ်ချထားသောဖိုင်သည် Zip ဖိုင်အနေနဲ့ပေါ်လာတယ်ဆိုပါက။ Zip ဖိုင်ကို ဖြေပြီး အထဲမှာပါတဲ့ Data တွေကို အခွေလွတ်ထဲသို့ကူးထည့်လိုက်ရုံပါ။ Boot CD တစ်ချပ်ဖန်တီးလို့ပြီးသွားပါပြီ။ ၄င်း Boot CD ကို
CD-Rom ထဲသို့ထားပြီး Windows တင်သလို First Boot မှာ CD-Rom ထားပြီး Boot တက်လိုက်ရုံပါဘဲ။
Boot တက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် Command Box တစ်ခုအနေနဲ့ စတင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
Video နဲ့တစ်ကွ သရုပ်ပြပုံများကိုလည်း တင်ပေးထားပါတယ်။ အဲဒီထဲက အတိုင်းလိုက်လုပ်လိုက်ပါ။
Video ထဲမှာ Winpass –u irfad လို့ရိုက်ပြထားပါတယ်။ irfad ဆိုတာ မိမိပေးထားသော ကွန်ပျူတာ နာမည်
သာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ မိမိက MgMg လို့ပေးပြီး passwords မေ့နေတယ်ဆိုရင် Winpass –u MgMg ပေါ့ခင်
ကောင်းတာရော..မကောင်းတာလုပ်တဲ့သူအတွက်ပါ အကျိုးရှိတာကြောင့် အသေးစိတ်ရှင်းမပြတော့ပါဘူးနော်။
Convert Your 1GB Memory Stick To 2GB Memory Stick Free (Special For All)
အဲဒါကတော့ နဂို ၀ယ်ကတည်းက 1GB
ပမာဏပဲပါလာတဲ့..Mp3,4,SD Card,Memory Stick,Memory Card တွေကို 2GB ပမာဏ ဖြစ်အောင်
ပြောင်းလဲပေးတဲ့ Software လေးပါ။ သူ့ကို 1GB ရှိတဲ့ Card တွေမှာဘဲ 2GB အထိတိုးအောင် အသုံးပြု
လို့ရမှာပါ။ Software အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး Card ထဲမှာရှိတဲ့ Data တွေအကုန်လုံးကို အခြား
နေရာတစ်ခုခုပေါ်သို့ကော်ပီကူးလိုက်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီ Software က Card တစ်ခုလုံးကို Format
ရိုက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖောမတ်ချပြီးရင် Card ကို စက်မှ ထုတ်ခိုင်းပါမယ်။ Card ကို ဖြုတ်ပြီး ပြန်ထည့်လိုက်
ပါ။ ပြီးရင် My Computer ကိုဖွင့်ပြီး မိမိပမာဏ တိုးထားတဲ့ Card ပေါ်ကို Right Click ထောက်၊ Properties
ခေါ်ပြီးကြည့်လိုက်ရင် 2GB ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါမယ်ခင်ဗျာ။
USB block လေးနဲ..မိမိစက်ကနေ.. မိမိ မသိဘဲ....Data တွေကိုကူးလို..မရအောင်.. ကာကွယ်ကြပါစို..
* Download and extract using Win-rar (or mount using virtual device) ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ။ လုပ်ပြီးသော်.. ၀င်း ရား ဆော့ဝဲဖြင့် ပြန်ဖြေပါ။
* Install setup file and after finishing installation, close it. ဖြေပြီးသောအခါ ရလာသော ဖိုင်ကို မိမိစက်တွင် အင်စတောလုပ်ပါ။
crack file ထဲက. exe file လေးကို.. copy လုပ်ပီး > Window C: > program files > USB block မှာ paste လုပ်ပီး run လိုက်ပါ...
registered successfully လို. ပေါ်လာပါမယ်..ပီးရင် သုံးလို.ရပါပီ.. မိမိ နှစ်သက်ရာ.. password ပေးပြီး ကာကွယ်လို. ရပါတယ်..
USB stick ကို ဖွင်.လို. ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်စက်မှာ password မသိဘဲနဲ..
CD/DVD drive / Internet Network တွေကိုလဲ ပိတ်လို.ရပါတယ် ရှင်..
Download လုပ်ရန် (ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့နေရာကနေ လုပ်နိုင်ပါတယ်)
USB block v1.30 iso (mediafire)
USB block v1.30 iso (dropbox)
USB stick ထည့်သောအခါ အောက်ပါပုံအတိုင်း မြင်ရမည်။
password ဖြည့်၍ ဆက်လက်သုံးနိုင်မည်။
Window Shutdown ပြသနာဖြစ်နေသူများအတွက်.
သာမန်အားဖြင့် Window ပြန်တင်လိုက်ရင်ကျိန်းသေပြန်ကောင်းမှာပါ။အော်..ဒါတော့ သူပြောမှလား..။
Computer Shutdown လုပ်တဲ့အခါမှာ တန်းပိတ်မသွားဘဲ..Error တွေတက်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲ
ကွန်ပျူတာပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ လုံးဝပိတ်မသွားတော့ဘဲ Window is Shutting Down ဆိုတဲ့နေရာမှာဘဲတစ်နေ
တတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုး ကြုံနေရပြီဆိုရင်တော့ Window ကို Repair လုပ်၊ ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ရင်
CD-ROM မှာ WindowXP CD ကိုထည့် ပြီးရင် Run Box မှာ sfc /scannow လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ Window
System ဖိုင်တွေကို စစ်ဆေးပြီးပြန်လည်ပြုပြင်ပေးသွားမှာပါ။ အဲဒီ နည်းတွေနဲ့လည်း Shutdown ပိတ်တာကြာ
နောက်တစ်နည်းကတော့Shutdown Shortcut တစ်ခုကို Desktop ပေါ်မှာဖန်တီးပြီး ကွန်ပျူတာကို အမြန်ပိတ်မှာပါ
ပထမဆုံးအနေနဲ့ Desktop ရဲ့လွတ်နေတဲ့တစ်နေရာမှာ Right Click ထောက်..New>Shortcut ဆိုတာကိုကလစ်
လိုက်ပါ။ Create Shortcut ဆိုတဲ့ Box တစ်ခုပေါ်လာပါမယ်။ အဲဒီ Box ထဲမှာ Shutdown.exe –s –t0ဆိုပြီးရိုက်
စနစ်တကျရိုက်ထည့်ပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲ..အညာသားလေး ရေးပြထားတဲ့ စာသားကိုကော်ပီကူးယူပြီးထည့်
လိုက်ပါ။ ထည့်ပြီးရင် Next>Finish ဆိုပြီးလုပ်လိုက်တာနဲ့..Desktop ပေါ်မှာ Shutdown Shortcut လေးတစ်ခု
ပေါ်လာမှာပါ။ အဲဒီ ဖိုင်လေးကို ကလစ်လိုက်ရုံနဲ့ ဘာပြသနာမှ မရှိတော့ဘဲ ကွန်ပျူတာအမြန်ပိတ်သွားမှာပါခင်ဗျာ
( ဒီနေရာမှာ Shutdown နဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းရှင်းပြပါမယ်)။ အညာသားလေးတို့ပုံမှန်ပိတ်နေ
ကျ Start မှာရှိတဲ့ Shutdown ဟာပိတ်တဲ့အခါမှာ ၀င်းဒိုးစ်ရဲ့စနစ်ဖိုင်တွေကိုတစ်ခုခြင်း လိုက်ပိတ်ပြီးမှ မော်နီတာ
ပိတ်သွားတာပါ။ အဲဒီလိုမျိုးလိုက်ပိတ်တဲ့အခါမှာ စနစ်ဖိုင်တစ်ဖိုင်ပျောက်ဆုံးနေရင် ဒါမှမဟုတ် ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကိုလုံးဝ
မပိတ်နိုင်တော့တဲ့အခါမှာ ရပ်နေပါတော့တယ်။အဲဒီအခါမှာ CPU ရဲ့ပါဝါခလုပ်ကို နှိပ်ထားလိုက်ရင် မော်နီတာပိတ်သွားပါမယ်။ဖြစ်လာခဲ့ရင်လဲ ပိတ်နည်းက အဲဒီနည်းဘဲရှိပါတယ်။ဒါအလုပ်မဟုတ်ပါဘူး..ရေရှည်မှာ စက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းများကိုထိခိုက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အညာသားလေးပြောပြထားတဲ့ Shortcut ဖန်တီးလိုက်ခြင်းသည်စက်ရဲ့ဘယ်စနစ်ဖိုင်ကိုမှတစ်ခုခြင်းလိုက်ပိတ်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲ..တစ်ခါတည်းဘာကိုမှမ
စောင့်ဘဲ အမြန်ပိတ်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။အခု အညာသားလေးပြောပြတဲ့နည်းက Shutdown Problem ဖြစ်နေတဲ့စက်များအတွက်သာရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဘာမှမဖြစ်တဲ့စက်များ ပြုလုပ်ရန်မသင့်ပါ။ Shutdown မြန်အောင်
ကဲ..အခုနောက်ထပ် Shutdown Problem ဖြေရှင်းတဲ့နည်း ဒါမှမဟုတ် Shutdown မြန်မြန်ပိတ်တဲ့နည်းလမ်းတွေ
Start>Run (Box) မှာ regedit လို့ရိုက်ထည့်ပါ။ HKEY_LOCAL_MACHINE \_ System \_ Current ControlSet \_ Control ဖိုလ်ဒါသို့အဆင့်ဆင့်ဝင်ပါ။ Control ကိုကလစ်လုပ်ပြီး မြင်ကွင်း ညာဘက်မှာရှိတဲ့ Wait ToKillServiceTimeout ကိုကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပါ။ သို့မဟုတ် ၄င်းစာသားပေါ်သို့မောက်စ်ညာကလစ်နှိပ်ပြီး Modify ကိုရွေးချယ်ပါ။ ပေါ်လာတဲ့ Edit String (box) မှာ value data: ကို 20000 လို့ပြထားတာ တွေ့ရပါမယ်။ ၄င်းကို
5000 သို့မဟုတ် 1000 သို့မဟုတ် နှစ်သက်သလို ပြင်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် registry ကို Exit ပေးပြီး ကွန်ပျူတာကို
နည်းလမ်း(၂)—Start>Run (box) မှာ regedit လို့ရိုက်ထည့်ပါ။ HKEY_CURRENT_USER \_Control Panel\_Desktop ကို ကလစ်လုပ်ပြီး မြင်ကွင်း ညာဘက်မှာရှိတဲ့ AutoEndTasks (Key) ကို ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပါ။
သို့မဟုတ် ၄င်းစာသားပေါ်သို့ မောက်စ် ညာကလစ်နှိပ်ပြီး Modify ကိုရွေးချယ်ပါ။ ပေါ်လာတဲ့ Edit String (box) မှာ value data:0 ကို 1 သို့ပြောင်းပါ။ ပြီးရင် ထုံးစံအတိုင်း Computer ကို Restart ချလိုက်ပါ။
နည်းလမ်း(၃)--ကွန်ပျူတာကို ပိတ်လိုက်ပေမယ့် နောက်ခံမှာ ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုခုက Run နေဆဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
Start/Run ကိုဖွင့်လို့ရရင် သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာကို Restart ခလုပ်ပြန် နှိပ်ပြီး Start/Run (box) မှာ msconfig
လို့ရိုက်ထည့်ပါ။ Services မှာ ကိုယ်မဖွင့်ရပါဘဲနဲ့ အလုပ်လုပ်နေ (Running) ဖြစ်နေတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲများကို တွေ့ရ
ပါမယ်။ ထို့အတူ Start-up မှာလည်း ၀င်စစ်ကြည့်ပါ။ ၄င်းမှ မလိုအပ်တဲ့ အလုပ်များကို Disabled သို့မဟုတ်
Stopped လုပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုယ်မသိဘဲ နောက်ခံမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ (လုပ်ငန်း)
များကြောင့် ကွန်ပျူတာကို ပိတ်ဖို့ရာ အချိန်ဆွဲနေသလိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာမှာ ဆော့ဖ်ဝဲ များစွာသုံး
ထားပြီး space နေရာကလည်း အလွန်နည်းနေတယ်ဆိုရင် ကွန်ပျူတာပိတ်တဲ့အခါ ၄င်းတို့ကို settings များကို
နည်းလမ်း(၄)--ကွန်ပျူတာကိုမပိတ်ခင် Crtl+Alt+Del ကိုနှိပ်ပြီး Task Manager ကိုဖွင့်ပါ။ Applications မှာအလုပ်လုပ်(Run)နေတဲ့ လုပ်ငန်းများတွေ့ရင် shutdown လုပ်ပိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးမှ ကွန်ပျူတာကို ပိတ်ပါ။
နည်းလမ်း(၅)--ကွန်ပျူတာမှာ Virus, Malware , Spyware စသည်ရှိနေရင်လည်း စနစ်ကို ပုံမှန်ဖြစ်အောင် မလုပ်
ဆောင်နိုင်လို့ ပိတ်ရာတွင် ကြာနေခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၄င်းအတွက် ဗိုင်းရပ်စ် ရှင်းလင်းခြင်းနဲ့အတူ Malware Spyware remover, registry cleaner, disk optimizers, windows update စသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ
ကိုပြုလုပ်ကြည့်ပါ။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းများကိုအထောက်အကူပြုစေရန် www.malwarebytes.org, www.iobit.com/beta.html, www.ccleaner.com များကိုဖွင့်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲများကို ရယူအသုံးပြုကြည့်ပါ
နည်းလမ်း(၆)—CD Drive မှာ ၀င်းဒိုးစ်စီဒီထည့်ထားပြီး Start>Run(box) မှာ sfc /scannow လို့ရိုက်ထည့်ပါ။
Sfc နဲ့ / ကြားမှာ space တစ်ချက်ခံပါတယ်။ CD Drive မှာ ၀င်းဒိုးစ်စီဒီမရှိရင် တောင်းပါလိမ့်မယ်။ ၄င်းသည်
ကွန်ပျူတာမှာ ပြသနာရှိနေတယ်ဆိုရင် စစ်ပြီးပြင်ပေးပါလိမ့်မယ် ။ အချိန်အနည်းအငယ်တော့ကြာပါတယ်။
လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်..မည်သူမဆို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ယခု နည်းလမ်းသည် ကွန်ပျူတာ
တွင် အခြားသော ပြသနာရပ်အချို့ကိုလည်း အလိုလို စစ်ဆေးပြီးပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ကြည့်ပါ။
နည်းလမ်း(၇)—အခု ကျွန်တော် Shutdown နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Command များအကြောင်းကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ ရှင်းပြပေးပါမယ်……………..။
Shutdown shortcut ခလုတ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပါမယ်။ Desktop တစ်နေရာမှာ မောက်စ် ညာကလစ် နှိပ်ပါ။ New ကနေ Shortcut ကိုရွေးချယ်ပါ။ Create Shortcut (box) ပေါ်လာပါမယ်။ အဲဒီ box ရဲ့
Type the location of the item မှာ Shutdown –s လို့ရိုက်ထည့်ပါ။ အမည်တစ်ခုခုပေးပါ။ Restart ပြန်လုပ်ရင်
Shutdown –r လို့ရိုက်ပါ။ အမည်ကို Reboot သို့မဟုတ် Restart လို့ပေးနိုင်ပါတယ်။
Shutdown –f လို့ရိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင် ၄င်းသည် ဖွင့်ထားတဲ့ ၊ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အခြားဆော့ဖ်ဝ်နဲ့ လုပ်ငန်းများကို ထည့်မစဉ်းစားဘဲအတင်းပိတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
shutdown –l ဆိုရင် လက်ရှိ User အတွက် logoff လုပ်ပေးပါမယ်……….။
shutdown –t nn သည် သတ်မှတ်ပေးတဲ့ အချိန်စက္ကန့်ကိုစောင့်ဆိုင်းပေးပါမယ်..။ nn နေရာမှာ စက္ကန့်ကို ထည့်ပေးပါ။
Shutdown –c “message” သည် သင်ပြလိုတဲ့သတင်းစာသားတစ်ခုခုကို System Shutdown Windows မှာ ပြပေးမှာဖြစ်ပြီး ၄င်းအတွက် စာလုံးရေ ၁၂၇လုံး အထိရိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘေးက Quotation marts ခံပေးပါ။
Shutdown –r –m //152.152.152.152 (ip address) ဆိုရင် အဲဒီ ip address ရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာကို ပိတ်ပြီး restart ပြန်လုပ်စေမှာပါ။ Shutdown –i ဆိုရင်တော့ server နဲ့ ၄င်း work Station များကို ပိတ်ပြီး restart ပြန်လုပ်စေပါတယ်။ အချို့က လုံးဝပိတ်ဖို့ရာ shutdown –s –t 04 –c လို့ရိုက်ကြပါတယ်။
Reboot (or) Restart အတွက် shutdown –r –t 04 –c လို့ရိုက်ပြီး shortcut တည်ဆောက်ကြပါတယ်။ အချို့က ပိတ်ဖို့ရာ shutdown –s –t 01 လို့ရိုက်ပြီး Reboot အတွက် shutdown –r –t 01 လို့ရိုက်ကြပါတယ်။
Shutdown –s –t 1500 ဆိုရင်တော့ ကွန်ပျူတာက ချက်ချင်း shutdown မကျဘဲ နာရီဝက်ကြာမှ ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ Shutdown Timer ပေးတဲ့နည်းလို့လဲပြောလို့ရပါတယ်။ ဘာမှမထိခိုက်စေတဲ့ နည်းလေးပါ။
1500 သည် မိနစ် ၃၀(နာရီဝက်) နဲ့ညီပါတယ်။ ကိုယ်လိုသလောက် အချိန်ပြောင်းလို့ရပါတယ်..။
အထက်ပါအချက်အလက်များအတွက် Start>Run (box) မှာ shutdown.exe လို့ရိုက်ထည့်ကြည့်ပါ။ ပိတ်တဲ့
Command များကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ..။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Super Fast Shutdown, Shutdown TimerXP,
JOC Master Shutdown, Auto Shutdown Genius, HSLAB Free Force Down ကဲ့သို့ ဆော့ဝ်များကို အင်တာ
နက်မှာ ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာဖွေကာ ဒေါင်းလွတ်ဆွဲပြီးသုံးကြည့်ပါ……..။
အထက်က အညာသားလေးဖော်ပြခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းတွေက တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ အဆင်ပြေမှာပါ။ နည်းလမ်း တွေအကုန်လုံးကိုလည်း လုပ်ကြည့်စရာမလိုအပ်ပါဘူး..။ နည်းတစ်ခု နဲ့အဆင်မပြေမှ နောက်နည်းတစ်ခု ကိုပြောင်းလုပ်ကြည့်ပါ။နောက်လဲ..Shutdown..နဲ့ပက်သတ်လို့ ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေ ရှာဖွေပြီးတင်ပြပေးသွား
File,Drive,Folder တွေကို မသက်ဆိုင်သူတွေဖွင့်မကြည့်နိုင်အောင် Lock ချပေးမယ့် Software။(Full Version)
မိမိကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ ဖိုင်တွေ ။ ဖိုလ်ဒါတွေ။ Drive တွေကို မသက်ဆိုင်သူတွေကြည့်လို့မရအောင် Lock
ချထားပေးမယ့် Folder Lock ဆိုတဲ့ Software လေးကို လိုချင်သူများ အောက်မယ်ယူနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ။
အသုံးပြုရတာ လွယ်ကူပြီး..Driver,Folder နဲ့ File တွေကို Lock ချထားလို့ရပါတယ်။
တစ်ခုချင်းစီကို Passwords ပေးပြီး လော့ခ်ချတာမဟုတ်တဲ့အတွက် Passwords မေ့မှာလဲမပူရတော့ပါ
Posted by minthantzaww at 00:47
Labels: gsm ဖုန်း တွင် အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ရန် setting ထည့်ခြင်း